Kushambadzira Acronyms, Kutengesa Acronyms, Tekinoroji Acronyms uye Mitsanangudzo Girosari | Martech Zone
Kushambadzira Acronyms uye Mitsananguro Glossary
Zvinoita senge vhiki rega rega, ndiri kuona kana kudzidza chimwe chirevo. Ndiri kuzochengeta inoshanda rondedzero yavo apa! Inzwa wakasununguka kusvetuka kuburikidza nearufabheti yeiyo kutengesa chirevo, kushambadzira chirevo, kana kutengesa uye kushambadzira tekinoroji chirevo urikutsvaga:
Nhamba A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (Numeric)
2FA - Zviviri-Factor Kubvuma: imwe yekuwedzera dziviriro inoshandiswa kuchengetedza kuchengetedzwa kwemaakaundi epamhepo kupfuura kwezita rezita nephasiwedi chete. Mushandisi anopinda pasiwedhi uyezve anodikanwa kuti apinde yechipiri nhanho yekusimbiswa, dzimwe nguva kupindura nekodhi yakatumirwa kuburikidza nemeseji meseji, email, kana kuburikidza neyekushandisa application.
4P - Chigadzirwa, Mutengo, Nzvimbo, Kukwidziridzwa: iyo 4P modhi yekushambadzira inosanganisira chigadzirwa kana sevhisi yauri kutengesa, iwe unobhadharisa zvakadii uye kukosha kwayo, kwaunoda kukwidziridza, uye kuti uchaikurudzira sei.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms uye zvipfupiso (A)
ABC - Gara Uchivhara: Iyi ndiyo yekutanga yezvinyorwa zvekutengesa zvaunofanira kudzidza sewechidiki mutengesi rep! Yakanakisa mashandiro ayo. Kuti uve mutengesi anobudirira zvinoreva kuti uchafanirwa kuita ABC.
ABM - Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira: inozivikanwawo sekiyi yekushambadzira account, ABM inzira yakasarudzika umo sangano rinobatanidza kutengesa uye kushambadzira kutaurirana uye rinotarisa kushambadza kune pre-yakatarwa tarisiro kana vatengi maakaundi.
ACoS - Kushambadzira Mutengo Wekutengesa: metric inoshandiswa kuyera mashandiro eiyo Amazon Sponsored Zvigadzirwa mushandirapamwe. ACoS inoratidza chiyero cheshambadziro kushandisa kune chakanangana nekutengesa uye chinoverengerwa neiyi fomula: ACoS = kushambadzira shandisa ÷ kutengesa.
ACV - Avhareji Yevatengi Kukosha: Kuchengeta nekutengesa ikozvino mutengi kunogara kuchidhura pane kuwana kuvimba kweumwe mutsva. Nekufamba kwenguva, makambani anoongorora huwandu hwepakati pamari pamutengi wavari kuwana uye vanotarisa kuwedzera izvozvo. Vamiriri veAccount vanowanzobhadharwa zvichienderana nekugona kwavo kuwedzera ACV.
AE - Akaita Executive: Iyi inhengo yekutengesa timu iyo inovhara madhiri nekutengesa anokwanisa mikana. Ivo vese inhengo yekambani yeakaunzi yakasarudzwa semutengesi anotungamira weiyo account.
AI - chakagadzirwa Intelligence: Bazi rakatenderedzwa resainzi yemakomputa ine chekuita nekuvaka michina yakangwara inokwanisa kuita mabasa anowanzoda huchenjeri hwevanhu. Kufambira mberi mu machine learning uye kudzidza kwakadzika kuri kugadzira paradigm shanduko mune angangoita ese chikamu cheiyo tech indasitiri.
AIDA - Kutarisisa, Kufarira, Chido, Chiito: Iyi inzira yekukurudzira yakagadzirirwa kukurudzira vanhu kutenga nekuwana kutarisisa kwavo, kufarira, kuda kwechigadzirwa, uyezve nekuvakurudzira kuti vatore matanho. AIDI inzira inoshanda yekufona kutonhora uye yakananga mhinduro kushambadzira.
AM - Nhoroondo Manager: AM ndiye mutengesi ane basa rekutarisira hombe account yevatengi kana boka hombe reakaundi.
API - Kunyorera Chirongwa Chekushandisa: Nzira dzekuparadzanisa masisitimu ekutaurirana. Zvikumbiro nemhinduro zvakamisikidzwa kuitira kuti vakwanise kutaurirana. Kungofanana nebrowser inoita chikumbiro cheHTTP uye ichidzorera HTML, maAPI anokumbirwa nechikumbiro cheHTTP uye kudzosa XML kana JSON.
AR - Augmented Reality: tekinoroji iyo inosimudzira chiitiko chakagadzirwa nekombuta pane maonero emushandisi nezvenyika chaiye, zvichizopa maonero akabatanidzwa.
ARPA - Avhareji MRR (pamwedzi inodzokororwa mari) Per Akaundi - Ichi chimiro chinobatanidza iyo inorehwa huwandu hwemwedzi wemari pamari dzose
ARR - Yegore Rinoitika Revenue: Inoshandiswa mumabhizinesi mazhinji anogadzira zvibvumirano zvegore rega. ARR = 12 X MRR
ASA - Avhareji Yekumhanyisa Kupindura: chiratidzo chebasa revatengi chinoratidza kuti mutengi akamirira kwenguva yakareba sei vasati vakwanisa kutaura nemumiriri webasa revatengi.
ASO - App Store Kuita: mubatanidzwa wezano, maturusi, maitiro, uye maitiro akaiswa kubatsira yako nhare yekushandisa nhare zvirinani uye kuongorora chinzvimbo chayo mukati meApp Store mitsva yekutsvaga.
ASR - AUtomatic Kutaura Kutaura: kugona kwesystem kuti unzwisise uye kugadzirisa kutaura kwekuzvarwa. ASR masisitimu anoshandiswa mune vabatsiri vezwi, chatbots, kushandura muchina, uye zvimwe.
AT - Akabatsirwa Technologies: chero tekinoroji inoshandiswa nemunhu akaremara kuwedzera, kuchengetedza, kana kugadzirisa kugona kwavo kushanda.
ATT - App Kutevera Kujeka: Chimiro pane Apple Apple zvishandiso zvinopa vashandisi kugona kwese kubvumidza uye kuona kuti yavo mushandisi data inoteedzerwa nemushandisi kana nefoni nefoni application.
AutoML - Zvoga Machine Kudzidza: Kuiswa kunotyisa kweMachina Kudzidza mukati meSalesforce iyo inogarisa vese vatengi uye ese mashandisiro emakesi pasina kudikanwa kwedata masayendisiti kuendesa.
AWS - Amazon Web Services: Mawebhusaiti eAmazon ane anopfuura 175 masevhisi eakawanda akasiyana matekinoroji, maindasitiri, uye mashandisiro emakesi anopa mubhadharo-se-iwe-enda nzira yemitengo.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms uye zvipfupiso (B)
B2B - Bhizinesi kuBhizinesi: B2B inotsanangura basa rekushambadzira kana kutengesa kune rimwe bhizinesi. Zvitoro zvakawanda zvekutengesa nemasevhisi zvinopa mamwe mabhizinesi uye akawanda maB2B transaction anoitika kuseri kwechiitiko chigadzirwa chisati chasvika kune vatengi.
B2C - Bhizinesi kuMutengi: B2C ndiyo yechinyakare bhizinesi modhi yemabhizinesi kushambadzira yakananga kumutengi. B2C kushambadzira masevhisi anosanganisira epamhepo kubhengi, auction, uye kufamba, kwete chete zvekutengesa.
B2B2C - Bhizinesi kune Bhizinesi kune Mutengi: e-commerce modhi inosanganisa B2B uye B2C yeiyo yakazara chigadzirwa kana sevhisi yekutengeserana. Bhizinesi rinogadzira chigadzirwa, mhinduro, kana sevhisi uye rinopa iro kune rimwe bhizinesi 'vashandisi-vekupedzisira.
BI - Bhizinesi Njere: Chishandiso kana chikuva chevaongorori kuti vawane data, vorishandisa, vobva variratidza. Chirevo kana zvabuda padhibhodhi zvinogonesa vatungamiriri vebhizinesi kuongorora maKPI uye imwe data kuitira kuti vaite sarudzo dziri nani.
BIMI - Zviratidzo zveBrand zvekuzivisa Mharidzo: tsananguro yeemail inogonesa kushandiswa kwemarogo-anodzorwa marogo mukati mekutsigira vatengi veemail. BIMI rinosimudza iro basa rakaiswa nesangano mukuisa dziviriro yeDMARC, nekuunza marogo emaki kubhokisi revatengi revatengi. Kuti mucherechedzo wechiratidzo uratidzwe, iyo email inofanirwa kupfuudza kuongorora kweDMARC, kuve nechokwadi chekuti domeini yesangano haina kuteedzerwa.
BOGO - Tenga Mumwe Tora Imwe: "Tenga imwe, tora imwe yemahara" kana "maviri pamutengo weimwe" inzira yakajairika yekusimudzira kushambadzira.
BOPIS - Tenga Pamhepo Sarudza-Mu-Chitoro: Maitiro ekuti vatengi vanogona kutenga pamhepo nekutora ipapo ipapo kunzvimbo yekutengesa yemuno. Izvi zvaive nekukura kwakakura uye kugamuchirwa nekuda kwedenda. Vamwe vatengesi vanotova nezviteshi zvekutyaira uko mushandi anotakura zvinhu akananga mumotokari yako.
BR - Bounce Rate: Bounce rate inoreva chiito chinoshandiswa nemushandisi pawebsite yako. Kana ivo vakagara pane peji uye vobva vaenda kune imwe saiti, ivo vaburitsa kubva pane rako peji. Inogona zvakare kureva email iyo inoreva kune maemail asingasviki mubhokisi rekuyera. Iyo KPI yekuita kweako zvemukati uye yakakwira bounce mwero inogona kuratidza isingashande yekushambadzira zvemukati pakati pezvimwe nyaya.
BANT - Budget Chiremera Chinoda Nguva: Iyi fomula inoshandiswa kuona kana iri nguva chaiyo yekutengesa kune tariro.
BDR - Mumiriri weBusiness Development: Yevakuru-chikamu chakasarudzika yekutengesa basa iro rine basa rekuvandudza hutsva hwehukama hukama, vanobatirana, uye mikana.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (C)
CAC - Mutengi Kuwana Mari - Imwe yekutengesa mazita ekuyera ROI. Mari dzese dzakanangana nekuwana mutengi. Nzira yekuverenga CAC ndeye (shandisa + mihoro + makomisheni + mabhonasi + pamusoro) / # yevatengi vatsva panguva iyoyo yenguva.
UNOGONA-SPAM - Kudzora Kupesana Kwevasina-Vanokumbirwa Zvinonyadzisira uye Kushambadzira: Uyu ndiwo mutemo weUS wakadzikwa muna 2003 unorambidza mabhizinesi kubva pakutumira tsamba pasina mvumo. Iwe unofanirwa kusanganisira sarudzo yekuzvinyora mumaemail ese uye haufanire kuwedzera mazita kwairi pasina mvumo yakaratidzwa.
CASS - Coding Akarurama Support System: inogonesa United States Postal Service (USPS) kuongorora kururama kwesoftware inogadzirisa uye inowirirana nekero dzemugwagwa.
CCPA - California Consumer Yakavanzika Mutemo: mutemo wenyika wakanangana nekusimudzira kodzero dzevamwe nekuchengetedzwa kwevatengi kune vanogara muCalifornia, United States.
CCR - Mutengi Churn Rate: Metric inoshandiswa kuyera kuchengetedzwa kwevatengi uye kukosha. Nzira yekumisikidza CCR ndeiyi: CR = (# yevatengi pakutanga kwenguva - # vatengi pakupera kwekuyera nguva) / (# yevatengi pakutanga kwekuyera nguva)
CDP - Mutengi Dhata Platform: yepakati, inoramba, yakabatana mutengi dhatabhesi iyo inowanikwa kune mamwe masisitimu. Dhata inoburitswa kubva kwakawanda masosi, kucheneswa, uye kusanganiswa kugadzira imwechete yevatengi chimiro (inozivikanwawo se360-degree maonero). Iyi data inogona kuzoshandiswa kushambadzira otomatiki zvinangwa kana nevatengi sevhisi uye vekutengesa nyanzvi kuti vanzwisise zvirinani uye vapindure kune zvinodiwa nevatengi. Iyo data inogona zvakare kuve inosanganisirwa neyekushambadzira masisitimu kune zviri nani chikamu uye tarisa vatengi zvichienderana nemaitiro avo.
CLM - Chibvumirano Lifecycle Management: inoshanda, inoteedzana manejimendi yechibvumirano kubva mukutanga kuburikidza nekupa mubairo, kutevedza, uye kuvandudza. Kutevedzera CLM kunogona kutungamira mukuvandudzika kwakakosha mukuchengetedza mutengo uye kugona.
CLTV kana CLV - Mutengi Hupenyu Hwose Kukosha: Chirevo chinobatanidza iyo mambure purofiti kune hwese hukama hwehupenyu hwevatengi.
CLS - Kuwedzera Kwemaitiro Shift: Chiyero cheGoogle chemushandisi uye peji ruzivo rwekugadzikana kugadzikana mune yayo Zvikuru Webhu Vitals.
CMO - Chief Marketing Officer: Chinzvimbo chepamusoro chinotungamira kwekutyaira kuziva, kubatanidzwa, uye kudiwa kwekutengesa (MQLs) mukati mesangano.
CMP - Zvemukati Kushambadzira Platform: Ipuratifomu yekubatsira vatengesi vezvinhu kuronga, kushandira pamwe, kubvumidza, uye kugovera zvemukati zvemasayiti, mabloggi, midhiya enhau, zvemukati zvinyorwa, uye / kana kushambadza.
CMRR - Akazvipira Pamwedzi Pamwedzi Revenue: Imwe yekutengesa chidimbu kubva kudivi rekuverenga. Iyi ndiyo nzira yekuverenga iyo MMR mugore rinouya remari. Iyo nzira yekuverenga CMRR ndeye (Ikozvino MMR + ramangwana rakazvipira MMR, kubvisa iyo MMR yevatengi isingafungidzike kuti ivandudze mugore remari.
CMS - Content Management System: Izvi zvinoreva chishandiso chinobatanidza uye chinogonesa iyo kugadzira, kugadzirisa, manejimendi, uye kugovera zvemukati. Kazhinji inoshandiswa kureva kune webhusaiti, mienzaniso yeCMS ndivo Hubspot uye WordPress.
CMYK - Cyan, Magenta, Yero, uye Kiyi: inobvisa kara yemhando, inoenderana neiyo CMY color modhi, inoshandiswa mukudhinda kwemavara. CMYK inoreva kumahwendefa mana eingi anoshandiswa mune mamwe mavara ekudhinda: cyan, magenta, yero, uye kiyi.
CNN - Convolutional Neural Network: mhando yeakadzika neural network inowanzo shandiswa pamakomputa ekuona mabasa.
COB - Kuvhara kweBhizinesi: Sezvazviri… "Tinofanirwa kusangana nemutero wedu waMay neCOBB." Kazhinji inoshandiswa zvakasiyana neEOD (End of Day). Nhoroondo, COB / EOD zvinoreva 5:00 pm.
CPC - Mutengo Per Click: Iyi ndiyo nzira inoshandiswa nevaparidzi kubhadharisa nzvimbo yekushambadza pawebhusaiti. Vashambadziri vanobhadhara chete kushambadza kana ichinge yadzvanywa, kwete yekufumura. Inogona kuratidza kumazana emasaiti kana mapeji, asi kunze kwekunge yaitwa, hapana muripo.
CPG - Mutengi Akapakurwa Zvinhu: Zvigadzirwa zvinotengeswa nekukurumidza uye nemutengo wakaderera. Mienzaniso inosanganisira isina kusimba zvinhu zvemumba zvakaita sezvakarongedzwa zvekudya, zvinwiwa, zvekugezesa, zviwitsi, zvigadzirwa, mishonga yekunze, zvinhu zvakaoma uye zvimwe zvinodyiwa.
CPI - Kwevatengi Performance Zviratidzo: Metric inotarisa pamaonero emutengi senge nguva yekugadzirisa, kuwanikwa kwezviwanikwa, nyore kushandisa, mukana wekukurudzira, uye kukosha kwechigadzirwa kana sevhisi. Aya mametric anonongedzwa zvakananga nekuchengetwa kwevatengi, kukura kwekuwana, uye kuwedzera kukosha pamutengi.
CPL - Mutengo PaMutungamiri: CPL inotarisa ese emitengo inoenda mukugadzira kutungamira. Kusanganisira kushambadzira madhora akashandiswa, chibatiso chisikwa, webhu inobhadharisa fizi, uye zvimwe zvakasiyana mutengo, semuenzaniso
CPM - Mutengo Nezviuru: CPM ndeimwe nzira vaparidzi yavanoshandisa kubhadharisa kushambadzira. Iyi nzira inobhadharisa pamabatiso chiuru (M ndiyo nhamba yechiRoma ye1000). Vashambadziri vanobhadhariswa pese panoonekwa shambadziro yavo, kwete kuti kangani kadzvanywa.
CPQ - Gadzira Mutengo Quote: Gadzira, mutengo quote software iri izwi rinoshandiswa mune bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) indasitiri kutsanangura software masisitimu ayo anobatsira vatengesi kutora zvigadzirwa zvakaoma uye zvinogadziriswa.
CRM - Customer Relationship Management: CRM rudzi rwe software inobvumidza makambani kubata nekuongorora kudyidzana kwevatengi muhukama hwavo nehupenyu hwehupenyu kuitira kusimudzira hukama ihwohwo. CRM software inogona kukubatsira iwe kushandura zvinotungamira, kukurudzira kutengesa uye kubatsira mukuchengetedza vatengi.
CR - Conversion Rate: Huwandu hwevanhu vanoita, vakakamurwa nenhamba inogona kuve. Semuenzaniso, kana mushandirapamwe wako weemail ukasvika kumatarisiro zana nemhinduro makumi maviri neshanu, chiyero chako chekushandura chiri 100%
CRO - Chief Revenue Officer: Mutungamiri anotarisira zvese kutengesa nekutengesa mukati mekambani.
CRO - Shanduko Yekuvandudza Kugonesa: Ichi chirevo ishortand yekutora tarisiro yekutengesa nzira inosanganisira mawebhusaiti, mapeji anomhara, midhiya enhau, uye maCTA kusimudzira huwandu hwetarisiro dzinoshandurwa kuva vatengi.
CRR - Mutengo Wekuchengetedza Kwevatengi: Iyo pesenti yevatengi yaunochengeta inoenderana nenhamba yawaive nayo pakutanga kwenguva (kwete kuverenga vatengi vatsva).
CSV - Makoma Akaparadzaniswa Maitiro: Iyo fomati fomati inowanzo shandiswa kuburitsa uye kupinza data mukati mehurongwa. Seizvo zita rinoratidzira, CSV mafaera anoshandisa makoma kupatsanura kukosha mu data.
CTA - Dana kuAte: Chinangwa chekushambadzira zvemukati ndechekuzivisa, kudzidzisa kana kufadza vaverengi, asi pakupedzisira chinangwa chechinhu chero chipi zvacho ndechekuti vaverengi vatore matanho pane izvo zvavakaverenga. CTA inogona kuve chinongedzo, bhatani, mufananidzo, kana webhu chinongedzo chinotyaira muverengi kuti aite nekurodha pasi, kufona, kunyoresa kana kuenda kuchiitiko.
CTOR - Dzvanya-Ku-Vhura Rate: Dzvanya-kuvhura mwero ndiyo nhamba yekudzvanya kubva kuhuwandu hwemaemail akavhurwa pane huwandu hweanotumirwa maemail. Iyi metric inopa mhinduro pamusoro pekuti dhizaini nekutumira mameseji zvakabatana sei nevateereri vako, nekuti mabhatani aya anongobva kuvanhu vanoona email yako.
CTR - Dzvanya Kupfuura Rate: CTR ndeye KPI inoenderana neCTA… zvakadii izvo kune kadiki kemafabheti muto! Peji rewebhu kana email kudzvanya-kuburikidza chiyero chinoyera chikamu chevaverengi vanotora chinotevera chiitiko. Semuenzaniso, mune peji rekumhara, iyo CTR ichave iri huwandu hwevanhu vanoshanyira peji rakakamurwa nenhamba vanotora nhanho voenda padanho rinotevera.
CTV - Connected TV: terevhizheni iyo ine ethernet yekubatanidza kana inogona kubatanidza kune internet zvisina waya, kusanganisira maTV anoshandiswa sekuratidzira kwakabatana kune mamwe madhijitari ane mukana weinternet.
CWV - Zvikuru Webhu Vitals: Seti yeGoogle yeicho chaicho-chenyika, mushandisi-yakatarisana metric iyo inoverengera akakosha maficha eiyo mushandisi ruzivo. Read more.
CX - Customer Experience: chiyero cheese ezvekubatana nzvimbo uye kudyidzana mutengi anazvo nebhizinesi rako uye brand. Izvi zvinogona kusanganisira kushandiswa kwechigadzirwa chako kana sevhisi, kuita newebsite yako, uye kutaurirana nekudyidzana nechikwata chako chekutengesa.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (D)
DAM - Digital Asset Management: Ipuratifomu uye sisitimu yekuchengetera yemafaira enhau midhiya kusanganisira mifananidzo nemavhidhiyo. Aya mapuratifomu anogonesa makambani kubata zvinhu zvavo sezvavanogadzira, kuchengeta, kuronga, kugovera, uye - zvingasarudzika - shandura zvemukati-zvinogamuchirwa zvemukati in nzvimbo yepakati.
DBOR - Dhatabhesi YeRekodhi: Iyo sosi yedhata yekutaurirana kwako pamasisitimu ane ruzivo rwechizvino-zvino. Kazhinji inozivikanwa se tsime rechokwadi.
DCO - Dynamic Zvemukati Kugadziridza: kuratidza kushambadzira tekinoroji iyo inogadzira yakasarudzika kushambadzira inoenderana nedata nezve muoni mune chaiyo-nguva sezvo kushambadzira kuri kupihwa. Kugadziriswa kwemunhu wekusika kune simba, kuyedzwa, uye kukwidziridzwa - zvichikonzera kuwedzerwa kwekudzvanya-kuburikidza nemitengo uye shanduko.
DL - Kudzidza Kwakadzika: zvinoreva mashini ekudzidzira mashandiro anoshandisa neural network ane akawanda akaturikidzana. Panguva imwecheteyo, kuwedzera huwandu hwematanho kunoda simba rakawanda rekugadzirisa komputa uye kazhinji inguva yakareba yekudzidzira yemuenzaniso.
DMP - Data Management Platform: Chikuva chinobatanidza yekutanga-bato dhata pane vateereri (accounting, vatengi, CRM, nezvimwewo) uye / kana wechitatu-bato (hunhu, huwandu hwevanhu, geographic) dhata kuitira kuti ugone kuvanongedza zvakanyanya.
DPI - Dots paInch: Iyo resolution, sekuyerwa nemazana mapikisheni akagadzirwa pamasendimita muchikona kana kudhindwa pane chinhu.
DRR - Dhora rekuchengetedza Mutero: Iyo muzana yemari yaunochengeta inoenderana nemari yawaive nayo pakutanga kwenguva (kwete kuverenga mari nyowani). Nzira yekuverenga izvi kupatsanura vatengi vako nenhamba yemari, wozoverenga iyo CRR padanho rega rega.
DSP - Chinodiwa Side Platform: Yekushambadzira yekutenga chikuva iyo inowana akawanda kushambadzira zvigadzirwa uye inoita kuti iwe ugone kunongedza uye kubhidha pane zvinoonekwa mune chaiyo-nguva.
DXP - Dhijitari Chiitiko Platform: Enterprise software yekushandurwa kwedhijitari yakanangana nekugadzirisa ruzivo rwevatengi. Aya mapuratifomu anogona kuve chigadzirwa chimwe chete asi anowanzove suite yezvigadzirwa zvinosanganisa digitized bhizinesi mashandiro uye zvakabatana zvevatengi zviitiko. Iine centralization, ivo zvakare vanopa analytics uye nzwisiso yakanangidzirwa pane zvakaitika kune mutengi.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms uye zvipfupiso (E)
ELP - Enterprise Kuteerera Platform: Chikuva chinotarisa zvinotaurwa nedhijitari zveindasitiri yako, bhurandi, vakwikwidzi, kana mazwi akakosha uye zvinokubatsira kuyera, kuongorora, uye kupindura kune zviri kutaurwa.
ERP - Enterprise Resource Planning: iyo yakasanganiswa manejimendi eakakosha mabhizinesi maitiro kumasangano makuru emabhizinesi.
ESM - Email Signature Kushambadzira: kuisirwa masiginecha emaimeri anogara aripo pasangano, kazhinji kacho neakadzika midzi, anoteedzana kufona kuti aite zvekuvaka nekuzivisa kushambadzira kuburikidza ne1: 1 maemail anotumirwa kubva mukati mesangano.
ESP - Email Service Provider: Chikuva chinokugonesa kutumira mavhoriyamu akakura ekutengesa kutaurirana kana maemail anoshanda, anotarisira vanyoreri, uye anoteerera nemirau yeemail.
EOD - Kupera kwezuva: Senge mu… "Tinofanirwa kusangana nekaMay quota neEOD." Kazhinji inoshandiswa zvakasiyana neECB (Kuvhara kweBhizinesi). Nhoroondo, COB / EOD zvinoreva 5 pm
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (F)
FAB - Zvimiro, Zvakanakira Kubatsirwa: Imwe yeanoshuvira kutengesa mazita, iyi inoyeuchidza vatambi vetimu kuti vatarise pane zvakanakira mutengi kubva pane chaanogadzira kana sevhisi, kwete pane zvavari kutengesa.
FIP - Kutanga Kuisa Kunonoka: Chiyero cheGoogle chemushandisi uye peji chiitiko chiitiko mune yayo Zvikuru Webhu Vitals.
FKP - Facial Keypoints: Mapoinzi anowanzo kurongwa akatenderedza mhino, maziso, uye muromo, kugadzira siginicha yechiso yakasarudzika kune mumwe nemumwe.
FUD - Kutya, kusava nechokwadi, kusahadzika: Nzira yekutengesa inoshandiswa kuti vatengi vasiye, kana kusasarudza kushanda nemukwikwidzi nekupa ruzivo rwunokonzera kusahadzika.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (G)
GA - Google Analytics: Ichi chishandiso cheGoogle chinobatsira vatengesi kuti vanzwisise zvirinani vateereri vavo, kusvika, chiitiko uye metric.
GAID - Google Kushambadza ID: yakasarudzika, yakasarudzika chinongedzo chakapihwa kune vanoshambadzira kuti vatevedze Android chishandiso. Vashandisi vanogona kumisazve maGAID emidziyo yavo kana kuvadzora kuti vasaise madhizaini ekutevera.
GAN - Kugadzira Kupokana Net: neural network iyo inogona kushandiswa kugadzira zvinyorwa zvitsva uye zvakasiyana.
GDD - Kukura-Kunotungamirwa Dhizaini: Uku kugadzirisazve kana kusimudzira kwewebhusaiti mukuwedzera nemaune kuita kuenderera kunoenderana nedhata-inotungamirwa.
GDPR - General Data Protection Regulation: mutemo pamusoro pekuchengetedzwa kwemashoko uye kuvanzika muEuropean Union uye neEuropean Economic Area. Inotarisawo kuchinjiswa kwe data rega kunze kwenzvimbo dzeEU neEEA.
GUI - Graphical Mushandisi Yekushandisa: chirongwa chekupindirana chinoonekwa zvinhu zvecomputer software.
GXM - Chipo Chiitiko Management: zano rekutumira zvipo nemakadhi emakadhi manhamba kune vanotarisira uye vatengi kutyaira kuziva, kutora, kuvimbika, uye kuchengetedza
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (H)
H2H - Munhu-Ku-Munhu: 1: 1 yekutengesa kwega uye kushambadzira kuyedza, kazhinji kuyerwa kuburikidza neotomation, uko mumiriri wekambani anotumira chipo kana meseji meseji kune tarisiro yekusimudzira kubatanidzwa.
HTML - Mutauro weHypertext Markup: HTML ndeyeti yemitemo programmers vanoshandisa kugadzira mapeji ewebhu. Inotsanangura zvirimo, chimiro, zvinyorwa, mifananidzo, uye zvinhu zvinoshandiswa pawebhu peji. Nhasi, mazhinji webhu software yekumhanyisa inomhanya HTML kumashure.
HTTP - Hypertext Transfer Protocol: yekushandisa protocol yekuparadzirwa, kubatirana, hypermedia ruzivo masisitimu.
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol: kuwedzerwa kweiyo Hypertext Transfer Protocol. Iyo inoshandiswa pakutaurirana kwakachengeteka pamusoro pekombuta network uye inoshandiswa zvakanyanya paInternet. MuHTTPS, iyo yekutaurirana protocol yakavharidzirwa uchishandisa Transport Layer Security kana, yaimbove, Yakachengeteka Socket Layer.
Kutengesa & Kushambadzira Acronyms uye zvipfupiso (I)
IAA - In-App Kushambadzira: Kushambadzira kwevatatu-vevashambadzi vanoburitswa mune mbozhanhare yekushandisa kuburikidza neshambadziro netiweki.
IAP - In-App Kutenga: Chimwe chinhu chakatengwa kubva mukati mekushandisa, kazhinji nharembozha inomhanya pane smartphone kana imwe nharembozha kana piritsi.
ICA - Yakabatanidzwa Zvemukati Zvekuongorora: Zvemukati-zvine chekuita analytics iyo inopa inoitika inoitika uchishandisa ekunyepedzera ungwaru (AI) matekinoroji.
ICP - Yakanaka Mutengi Mbiri: Mutengi persona iyo inogadzirwa ichishandisa chaiyo data uye neruzivo rwekufungidzira. Ndiyo rondedzero yetarisiro yakanaka kune yako yekutengesa timu yekutevera. Inosanganisira ruzivo rwevanhu, ruzivo rwenharaunda, uye maitiro epfungwa.
IDE - Integrated Development Environment: isoftware yekuvaka zvishandiso zvinosanganisa zvakajairika ekuvandudza maturusi mune imwechete mushandisi graphical mushandisi interface (GUI).
IDFA - Chitupa cheVashambadziri: chisingazivikanwe mudziyo chinongedzo chakapihwa neApple kune chishandiso chemushandisi. Vashambadzi vanoshandisa izvi kuteedzera data kuitira kuti vagone kuendesa kushambadza kushambadza. Ne iOS 14, izvi zvichagoneswa kuburikidza nechisarudzo-chekupinda pane kwete nekutadza.
ILV - Inbound Lead Velocity: Chiyero cheyero iyo inotungamira iri kuwedzera.
iPaaS - Kubatanidza Platform seSevhisi: Zvekushandisa maturusi anoshandiswa kubatanidza software kunyorera izvo zvakaiswa munzvimbo dzakasiyana, kusanganisira ese maviri makore ekushandisa uye on-premise kunyorera.
IPTV - Internet Protocol Terevhizheni: kuyerera kweiyo terevhizheni yezvinyorwa pamusoro peInternet Protocol netiweki pane kuburikidza neyakajairwa satellite uye tambo terevhizheni mafomati
ISP - Internet Service Provider: Anopa mukana weinternet uyo anogona zvakare kupa email masevhisi kumutengi kana bhizinesi.
IVR - Inopindirana Yezwi Kupindura: Inopindirana izwi kupindura tekinoroji inobvumidza vanhu kusangana nekombuta-inoshandiswa nhare mbozha. Matekinoroji ekare anoshandisa toni dzenhare dzekhibhodi… masisitimu matsva anoshandisa mhinduro yezwi uye kugadzirisa mutauro.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (J)
Kutengesa & Kushambadzira Acronyms uye zvipfupiso (K)
KPI - Yakakosha Performance Indicator: kukosha kunogona kuyerwa kunoratidza kuti kambani iri kubudirira sei pazvinangwa zvayo. Yakakwira-chikamu KPIs inotarisa pane kuita kwese kwebhizinesi, nepo yakaderera-chikamu KPIs inotarisa pane zvinoitwa mumadhipatimendi senge kutengesa, kushambadzira, HR, rutsigiro, nevamwe.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms uye zvipfupiso (L)
L2RM - Tungamira kuRevenue Management: Muenzaniso wekuita nevatengi. Iyo inosanganisa maitiro uye metric uye inosanganisira zvinangwa zvekutsvaga kwevatengi kutsva, kumusoro-kutengesa varipo vatengi, uye kuwedzera mari.
LAARC - Teerera, Bvuma, Ongorora, Pindura, Simbisa: Maitiro ekutengesa anoshandiswa kana uchisangana nemhinduro dzisina kunaka kana kupokana panguva yekutengesa.
LAIR - Teerera, Bvuma, Ziva, Reverse: Imwe yekutengesa mazita ekugadzirisa maitiro. Iyi inoshandiswa kupikisa zvinopesana munzvimbo yekutengesa. Kutanga, teerera kune zvinovanetsa, wobva wadzokorora kuti ubvume kunzwisisa kwako. Ziva chikonzero chekutanga chekusatenga uye kudzoreredza kunetseka kwavo nekumisikidza kuramba kwavo nenzira yakanaka.
LAT - Yakatemerwa Ad Kutevera: Chishandiso chemafoni chinobvumira vashandisi kusarudza-kuva neID yeVashambadziri (IDFA). Nechigadziro ichi chakagoneswa, iyo IDFA yemushandisi inoita kunge isina chinhu, saka mushandisi haazoone chaiwo ma ads akanangwa kwavari nekuti, sekuona kuri kuita network, chishandiso hachina kuzivikanwa.
LCP - Yakakura Kugutsikana Paint: Chiyero cheGoogle cheji yemushandisi ruzivo uye kurodha kuita (peji kumhanya) mune yayo Zvikuru Webhu Vitals.
LSTM - Yakareba Pfupi-Pfupi Ndangariro: musiyano wezvekudzokorora neural network. Iko kusimba kweLSTMs kugona kwavo kurangarira ruzivo kwenguva yakareba uye kurishandisa kune iro razvino basa.
Kutengesa & Kushambadzira Acronyms uye zvipfupiso (M)
MAIDs - Nhare dzekushambadzira ID or Mobile Ad ID: mushandisi-yakatarwa, inogadziriswazve, isingazivikanwe chinongedzo inosanganiswa neyeyemushandisi smartphone mudziyo uye inotsigirwa nhare yavo yekushandisa sisitimu. MAID anobatsira vagadziri uye vashambadzi kuziva kuti ndiani ari kushandisa yavo app.
MAP - Kushambadzira Automation Platform: Tekinoroji inobatsira vashambadzi kushandura tarisiro kuva vatengi nekubvisa yakakwira-kubata, manyore kudzokorora maitiro nema automated mhinduro. Salesforce Kushambadzira Cloud uye Marketo mienzaniso yeMAP.
MDM - Master Data Management: Maitiro anogadzira yunifomu seti yedata pane vatengi, zvigadzirwa, vatengesi, uye mamwe mabhizinesi masisitimu kubva kune akasiyana tekinoroji masisitimu.
ML - Machine Kudzidza: AI neML inowanzo shandiswa zvakasiyana, pane misiyano pakati pemitsara miviri.
MMS - Multimedia Meseji Service: inobvumira vashandisi veSMS kutumira zvemultimedia zvemukati, zvinosanganisira mifananidzo, odhiyo, nhare mbozha, uye mavhidhiyo mafaera.
MNIST - Yakagadziridzwa National Institute of Standards uye Technology: Iyo MNIST dhatabhesi ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa mabhenji madhataseti mukufunda kwemuchina.
MoM - Mwedzi-Kupfuura-MwedziShanduko dzakaratidzwa maererano nemwedzi wapfuura. MoM inowanzo kuve isingachinjike kupfuura makota kana gore-pamusoro-gore zviyero uye inoratidza zviitiko zvakaita sezororo, njodzi dzinongoitika dzoga, uye nenyaya dzehupfumi.
MPP - Tsamba Yakavanzika Kudzivirirwa: Tekinoroji yeApple inobvisa chiratidzo chakavhurika (chikumbiro chepikisheni) kubva kushambadziro maemail kuitira kuti email yevatengi isvinurike isingateedzerwe.
MQA - Kushambadzira Akafanirwa Akaunzi: the ABM zvakaenzana nekutengesa vanokwanisa kutungamira. Kungofanana neMQL inoratidzirwa seyakagadzirira kupfuudza kune kutengesa, iyo MQA account inoratidzirwa yakaringana mwero wakaringana wekubata kuratidza zvinogona kutengeswa-kugadzirira.
MQL - Kushambadzira Anotungamira Anotungamira: Chero munhu akamboshanda nemafemu ako kushambadzira uye achiratidza kuti vane hanya zvakanyanya nezvipo zvako uye anogona kuve mutengi ndeye MQL. Kazhinji inowanikwa kumusoro kana pakati peiyo faneli, MQLs inogona kukudzwa nezvose kushambadzira nekutengesa kushandura kuva vatengi.
MQM - Kushambadzira Yakakodzera Misangano: MQM chiratidzo chakakosha chekuita chinotsanangurwa seCTA chaiyo (kudaidzira kuita) pane ako ese ekushambadzira edigital zvirongwa uye zviitiko zvechokwadi.
MR - Mixed Reality: kubatanidzwa kwenyika chaiko uye chaiko kuburitsa nharaunda nyowani uye kutaridzika, uko zvinhu zvepanyama uye zvemadhijitari zviripo uye zvinowirirana mune chaiyo-nguva.
MRM - Kushambadzira Resource Management: mapuratifomu anoshandiswa kugadzirisa kugona kwekambani kuronga, kuyera, uye kugadzirisa zviwanikwa zvekushambadzira. Izvi zvinosanganisira zvese zviwanikwa zvevanhu nezvepuratifomu.
MRR - Mwedzi Unodzokororwa Revenue: kunyorera-kwakavakirwa masevhisi kuyera iyo inofungidzirwa mari inotarisirwa pamwedzi unoitika hwaro.
MFA - Multi-Factor Kubvuma: imwe yekuwedzera dziviriro inoshandiswa kuchengetedza kuchengetedzwa kwemaakaundi epamhepo kupfuura kwezita rezita nephasiwedi chete. Mushandisi anopinda pasiwedhi uyezve anodikanwa kuti apinze mamwe mazinga echokwadi, dzimwe nguva achipindura nekodhi yakatumirwa kuburikidza nemeseji meseji, email, kana kuburikidza neyekushandisa application.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (N)
NER - Inotumidzwa Bhizinesi Kuzivikanwa: chiitiko chakakosha muNLP mamodheru. Mazita ane mazita anoreva mazita chaiwo mukati mechinyorwa - kazhinji vanhu, nzvimbo, kana masangano.
NFC - Pedyo neMunda Kukurukurirana: nzira dzekutaurirana dzekutaurirana pakati pemidziyo miviri yemagetsi padanho re4 cm kana pasi. NFC inopa yakaderera-mhanya kubatana neyakareruka setup iyo inogona kushandiswa kubhootstrap yakawanda inokwanisa waya isina kubatana
NLP- NAtural Mutauro Kugadziriswa: kudzidza kwemutauro wevanhu mukati mekudzidza kwemuchina, kugadzira masisitimu anonyatsonzwisisa iwo mutauro
NLU - Natural Mutauro Kunzwisisa: Kunzwisisa-mutauro mutauro ndiko kugona kwehunyanzvi hwekugona kududzira uye kunzwisisa chinangwa chemutauro wakagadziriswa uchishandisa NLP.
NPS - Net Promoter Score: Metric yekugutsikana kwevatengi nesangano. Net Promoter Score inoyera mukana wekuti mutengi wako achakurudzira chigadzirwa chako kana sevhisi kune vamwe. Yakayerwa pachiyero che0 - 10 uye zero isina mukana wekukurudzira.
NRR - Net Dzokororo Revenue: iyo yakazara mari yemaakaundi achangotengwa kune yako yekutengesa system uye pamwedzi inowedzerwa mari kune maakaundi azvino, kubvisa iyo mari yakarasika kubva kuvharwa kana kuderedzwa maakaunzi panguva imwecheteyo nguva, inowanzoyerwa pamwedzi.
Kutengesa & Kushambadzira Acronyms uye zvipfupiso (O)
OCR - Optical Hunhu Kuzivikanwa: maitiro ekutsvaga akanyorwa kana akadhindwa mavara.
OOH - Kunze kweMusha: OOH kushambadzira kana kushambadzira kwekunze, kunozivikanwa sekunze-kwe-kumba midhiya kana vekunze vezvenhau, kushambadzira kunosvika kune vatengi vachiri kunze kwemisha yavo.
OTT - Zvakanyanyisa: yekushambadzira midhiya sevhisi yakapihwa zvakananga kune vanoona online OTT inodarika tambo, nhepfenyuro, uye satellite terevhizheni mapuratifomu.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (P)
PDF - Portable Gwaro Faira: PDF ndeye muchinjika-chikuva faira fomati yakagadzirwa neAdobe. PDF ndiyo yemuno faira fomati yemafaira akawanikwa uye akashandurwa uchishandisa Adobe Acrobat Zvinyorwa kubva kune chero chishandiso zvinogona kuchinjirwa kuPDF.
PPC - Pay Per Click: Muparidzi anopomera vashambadziri pachiito chega chega tora (tinya) pane kwavo kushambadza. Onawo CPC.
PFE - Probabilistic Chiso Embeddings: nzira yekuona kumeso mabasa munzvimbo dzisinganyatsogadziriswa.
PII - Zvimwe Zvingazivikanwe Mashoko: Izwi reUS-rakatemwa kana rakatengwa data iro, roga kana kana rikasanganiswa nedzimwe data, rinogona kushandiswa kuzivisa mumwe munhu.
PIM - Chigadzirwa Ruzivo Management: kugadzirisa ruzivo rwunodiwa kushambadza nekutengesa zvigadzirwa kuburikidza nenzira dzekuparadzira. Iyo yepakati seti yechigadzirwa data inogona kushandiswa kugovana / kugashira ruzivo nevezvenhau senge mawebhusaiti, anodhinda makatalogu, ERP masystem, PLM masystem, uye zvemagetsi dhata inopa kune vanotengesa vanobatirana.
PLM - Chigadzirwa Lifecycle Management: maitiro ekugadzirisa hupenyu hwese hwechigadzirwa kubva pakutanga, kuburikidza neinjiniya dhizaini uye kugadzira, kusevha uye kurasa zvigadzirwa zvakagadzirwa.
PM - Project Manager: iyo tsika yekutanga, kuronga, kubatana, kuita, kuteedzera, uye kuvhara basa rechikwata kuzadzisa zvinangwa uye nguva.
PMO - Project Management Office: dhipatimendi mukati mesangano rinotsanangura nekuchengetedza zviyero zve manejimendi manejimendi.
PMP - Project Management Professional: izita rinozivikanwa repasi rose rinopihwa ne Project Management Institute (PMI).
PQL - Chigadzirwa Inotungamira Inotungamira: tarisiro iyo yakawana kukosha kwakakosha uye kugamuchirwa kwechigadzirwa uchishandisa SaaS chigadzirwa kuburikidza neyemahara kuyedza kana freemium modhi.
Peji Chinzvimbo: Peji chinzvimbo chakatarwa nealgorithm inoshandiswa neGoogle iyo inopa yega yega webhusaiti huremu hwehuwandu zvichienderana nenhamba dzakasiyana, dzakavanzika maitiro. Chiyero chinoshandiswa ndi0 - 10 uye nhamba iyi inotemerwa nezvakawanda zvinoverengeka zvinosanganisira zvinowanda mukati, uye iro peji peji renzvimbo dzakabatana. Iyo yepamusoro peji rako chinzvimbo, kune akakosha uye akakosha saiti yako inoonekwa neGoogle.
Public Relations: PR's chinangwa kuwana rusununguko kutarisisa kune rako bhizinesi. Inopa zvine hungwaru bhizinesi rako nenzira ine nhau uye inonakidza uye isiri yakananga nzira yekutengesa.
PRM - Partner Ukama Management: maitiro enzira, mazano, uye mapuratifomu ayo anobatsira mutengesi kubata hukama hwehukama.
PSI - Peji Yakawanikwa Insights: The Nhamba yeGoogle PageSpeed ​​Insights Chikamu chinobva pa0 kusvika pamapoinzi zana. Chikamu chepamusoro chiri nani uye zvibodzwa zve 100 kana pamusoro zvinoratidza kuti peji racho riri kuita nemazvo.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (Q)
QOE - Hunhu hweKubata: Hunhu hweZviitiko chiyero chekunakidzwa kana kutsamwiswa kwezviitiko zvevatengi nebasa. Yakananga kune vhidhiyo, QoE inoonekwa nehunhu hweiyo Video inoyerera kune mushandisi mudziyo, uye mhando yekutamba kana uchiratidza iyo Video pane mudziyo wemushandisi.
QoS - Hunhu hweSevhisi:
Vatengi Sevhisi - QoS chiyero chevashandi chevatengi icho chako rutsigiro rwevatengi, sevhisi, kana maakaundi zvikwata zviri kupa vatengi vako, zvinowanzo unganidzwa kuburikidza nekugara kuchirongwa kuongororwa.
Networking - QoS kugona kupa kwakasiyana kwakasiyana kune akasiyana mashandisiro, vashandisi, kana dhata kuyerera, kana kuvimbisa imwe nhanho yekuita.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms uye zvipfupiso (R)
REGEX - Kugara Uchiratidza: nzira yekuvandudza yekutsvaga uye kuona maitiro evatambi mukati mechinyorwa kuti aenderane kana kutsiva iwo mavara. Zvese zvemazuva ano zvirongwa zvemitauro zvinotsigira zvakajairika Mataurirwo.
Zororo - Mumiririri weNyika Kutamisirwa: Iyo yekuvaka dhizaini yeAPI dhizaini yekuparadzira masisitimu ekutaurirana kune mumwe neumwe kuburikidza neHTTP.
RFID - Radio-frequency kuzivikanwa: inoshandisa magetsi emagetsi kuti ione otomatiki uye nekuteedzera ma tag akasungirirwa kuzvinhu. Iyo RFID system ine diki redhiyo transponder, redhiyo inogamuchira, uye transmitter.
RFP - Chikumbiro chePfungwa: Kana kambani iri kutsvaga mumiriri wekushambadzira ivo vachaburitsa RFP. Makambani ekushambadzira anobva agadzirira zano zvichienderana nemirairidzo yakatarwa muRFP uye voigovera kune vangangoita mutengi.
RGB - Tsvuku, Girinhi, Bhuruu: yemhando yemhando yemhando iyo tsvuku, girini, uye bhuruu mwenje inowedzerwa pamwechete munzira dzakasiyana siyana dzekubereka huwandu hwakawanda hwemavara. Zita remhando yacho rinouya kubva mukutanga kwematatu ekuwedzera mavara, tsvuku, girini, uye bhuruu.
RMN - Retail Media Network: chikuva chekushambadzira chakabatanidzwa muwebsite yemutengesi, app, kana mamwe mapuratifomu edhijitari, achibvumidza mabhenji kushambadza kune vashanyi vevatengesi.
RNN - Recurrent Neural Network: mhando yeiyo neural network ine zvishwe. Chimiro chayo chakagadzirirwa kubvumira ruzivo rwakagadziriswa kare kuti rukanganise mashandiro edudziro ruzivo rutsva
ROAS - Dzokera pane Ad Spend: metric yekushambadza inoyera kushanda kwemushandirapamwe wekushambadza nekuyera mari inowanikwa padhora roga roga rakashandiswa.
ROI - Dzoka Investment: Imwe yekutengesa mazita anotarisana neaccounting, iyi metric yekuyera inoyera purofiti uye inoverengwa uchishandisa fomula ROI = (mari - mutengo) / mutengo. ROI inogona kukubatsira kuti uone kana ingangoita mari yekudyara yakakosha kumberi uye kuenderera kwemitengo kana kana kudyara kana kuyedza kuchizopfuurira kana kumiswa.
ROMI - Dzoka pane Kushambadzira Investment: Iyi ndiyo metric yekuita inoyera purofiti uye inoverengwa uchishandisa fomu yeROMI = (mari - kushambadzira mutengo) / mutengo. ROMI inogona kukubatsira iwe kuona kana chingave chekushambadzira chirongwa chakakosha kumusoro uye nekuenderera mitengo kana kana iko kuedza kuchizopfuurira kana kumiswa.
RPA - Robotic Maitiro Ekushandisa: bhizinesi maitiro otomatiki tekinoroji akavakirwa pamadimikira software marobhoti kana ekunyepedzera njere / digital vashandi.
RSS - Kubatana kuri nyore: RSS ndeye XML markup yakatarwa yekubatanidza uye kugovana zvemukati. inopa vashambadziri nevaparidzi nzira yekuburitsa otomatiki nekubatanidza zvirimo. Vanyoreri vanogashira otomatiki zvigadziriso pese panotsikiswa zvemukati zvitsva.
RTB - Yechokwadi-Nguva Kubhidha: nzira yekutengesa zvinyorwa zvinotengwa uye kutengeswa pane yega-yekufungidzira hwaro, kuburikidza nekukurumidza chirongwa chehurongwa.
RTMP - Yechokwadi-Nguva Yemeseji Protocol: TCP-based protocol yakagadzirwa neMacromedia (Adobe) muna 2002 kutepfenyura odhiyo, vhidhiyo, uye data pamusoro peinternet.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (S)
SaaS - Software somunhu Service: SaaS isoftware inotambirwa pagore nekambani yechitatu-bato. Makambani ekutengesa anowanzo shandisa SaaS kubvumidza kubatana kuri nyore. Iyo inochengetera ruzivo pane iro gore uye mienzaniso inosanganisira Google Apps, Salesforce, uye Dropbox.
SAL - Kutengesa Yakagamuchirwa Kutungamira: Iyi MQL yakagamuchirwa zviri pamutemo kutengesa. Yakaongororwa yehunhu uye inokodzera kuteedzerwa. Kutsanangura maitiro ezvinokodzera uye MQL kuve SAL kunogona kubatsira kutengesa reps kusarudza kana vachifanira kudyara nguva nekuedza mukutevera.
SDK - Software Yekuvandudza Kit: Kubatsira vanogadzira kuti vatange musoro, makambani anowanzo kushambadzira pasuru yekuisa kirasi kana mabasa anodiwa nyore nyore muzvirongwa zviri kunyorerwa nemusunguri.
SDR - Mumiriri Wekutengesa Kwekutengesa: Basa rekutengesa iro rine basa rekuvandudza hukama hutsva hwebhizinesi nemikana.
SEM - Tsvaga Injini yekutengesa: Kazhinji zvinoreva kutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga kutsvaga kubhadhara-per-click (PPC) kushambadzira.
SEO - Tsvaga Engine Optimization: Chinangwa cheSEO ndechokubatsira webhusaiti kana chidimbu chemukati "kuwanikwa" pa internet. Tsvaga injini seGoogle, Bing, uye Yahoo scan zvemukati zvemukati zvinoenderana. Uchishandisa akakosha mazwi uye marefu-muswe mazwi akakosha anogona kuvabatsira kunongedza saiti saiti saka kana mushandisi achitsvaga, inowanikwa zviri nyore. Kune zvakawanda zvinhu zvinokanganisa SEO uye iwo chaiwo algorithmic misiyano yakanyatso chengetedzwa ruzivo rwekuchengetedza.
SERP - Tsvaga Injini Result Peji: Iyo peji raunomira pauri kana iwe uchitsvaga rakasarudzika kiyi kana izwi pane yekutsvaga injini. Iyo SERP inonyora ese emapeji ekumisikidza ezita iro rakakosha kana izwi.
SFA - Salesforce Mashandisiro: Kutengesa chirevo che software iyo inoitisa zviitiko zvekutengesa senge yekudzoreredza, kutengesa, kuteedzera kusangana kwevatengi, uye kuongorora fungidziro uye fungidziro.
SKU - Stock Kuchengeta Chikamu: Chitupa chakasarudzika chechimwe chinhu chekutenga. SKU inowanzo encodhedzwa mubarcode uye inobvumira vatengesi kuti vatore uye vango tarisa kufamba kweiyo hesera. SKU inowanzo sanganisira alphanumeric mubatanidzwa wemasere-kana-anopfuura mavara
SLA - Service Level Agreement - SLA igwaro remutemo repamutemo rinotsanangura basa rekushambadzira nekutengesa muchizvarwa chinotungamira uye nehurongwa hwekutengesa. Iyo inoratidzira huwandu uye mhando yeinotungamira kushambadzira inofanirwa kuburitsa uye kuti iyo timu yekutengesa inotevera sei kutungamira kwega kwega.
SM - Social Media: Mienzaniso inosanganisira Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, uye Youtube. SM saiti mapuratifomu anotendera vashandisi kutumira zvemukati zvinosanganisira vhidhiyo uye odhiyo. Mapuratifomu anogona kushandiswa kune bhizinesi kana zvemukati zvemukati uye bvumidza organic traffic pamwe neye yakatsigirwa kana yakabhadharwa machira.
SMART - Yakananga, Inopimika, Inowanikwa, Yechokwadi, Nguva-Yakasungwa: Acronym inoshandiswa kutsanangura maitiro-ekugadzika maitiro. Iyo inokubatsira iwe kutsanangura zvakajeka uye kumisikidza zvinangwa nekuburitsa matanho matanho anodiwa kuti uzviite.
SMB - Diki uye Pakati Pakati-Sized Mabhizinesi: Acronym inotsanangura mabhizinesi ane pakati pe5 ne200M mune mari. Zvakare zvinoreva vatengi vane zana kana vashoma vashandi (vadiki) kusvika 100 - 100 vashandi (vari pakati nepakati)
SME - Nyaya Yenyaya Nyanzvi: chiremera mune imwe nharaunda kana musoro unova sosi yekuvandudza kutaurirana kwevatengi Kune vashambadziri, vangangoita vatengi, makiyi vatengi, vamiririri vekutengesa, uye vamiriri vevashandi vevatengi kazhinji maSME ayo anopa zvakakomba kuiswa.
Social Media Marketing: Kushandisa mapuratifomu enhau senzira yekusimudzira zvirimo, kushambadza kune tarisiro, kusangana nevatengi, uye teerera mikana kana zvinetswa zvine chekuita neyakavanzika yako.
SMM - Social Media Management: Maitiro uye masisitimu anoshandiswa nemasangano kuendesa nzira yavo yekushambadzira midhiya.
SMS - Pfupi Meseji Service: Ndiyo imwe yetsika dzekare kutumira mameseji-akavakirwa meseji kuburikidza nharembozha.
SOAP - Nyore Object Access Protocol: SOAP ndeyekutumira mameseji protocol yekutsinhana ruzivo rwakarongwa mukumisikidzwa kwewebhu masevhisi mumakomputa network
SPIN - Mamiriro, Dambudziko, Kukosha, Kuda: Imwe nzira yekutengesa iri "kukuvadza uye kununura" nzira. Iwe unowana iwo marariro etarisiro uye wo "kuvarwadzisa" nekuwedzera pane zvinogona kuitika. Ipapo iwe unouya ku "kununura" neako chigadzirwa kana sevhisi
Kutengesa Kwakakodzera Mutungamiriri: SQL inotungamira iyo yakagadzirira kuve mutengi uye inokodzera nzira dzakagara dzatemwa dzepamusoro-soro lead. SQLs dzinowanzo kuverengerwa nezvose zviri zviviri kushambadzira uye kutengesa usati wasarudzwa semutengesi-anokwanisa kutungamira.
Yakarongeka Mutauro Mutauro: mutauro unoshandiswa muchirongwa uye wakagadzirirwa kubata data rakachengetwa mune yehukama dhatabhesi manejimendi sisitimu, kana yekushambadzira kuyerera mune yehukama data rwizi manejimendi manejimendi system.
SRP - Zvehukama Hukama Platform: Chikuva chinogonesa makambani kuongorora, kupindura, kuronga, kugadzira, uye kubvumidza zvemukati munzvimbo dzemagariro enhau.
SSL - Secure Sockets Layer: cryptographic protocols yakagadzirirwa kupa kutaurirana kuchengetedzeka pamusoro pekombuta network.
SSP - Supply Side Platform: Ipuratifomu inoita kuti vaparidzi vape huwandu kumusika wekushambadzira kuitira kuti vatengese nzvimbo yekushambadzira pane yavo saiti. SSPs dzinowanzobatana neDSPs kuwedzera kwavo kusvika uye mukana wekutyaira kushambadzira mari.
STP - Segmentation, Targeting, Position: Iyo STP modhi yekushambadzira inotarisa pakubudirira kwekushambadzira, kusarudza zvikamu zvakakosha zvebhizinesi, uyezve kugadzira musanganiswa wekushambadzira uye zano rekumisa chigadzirwa kwechikamu chimwe nechimwe.
Kutengesa & Kushambadzira MaAcronyms nemipfupiso uye zvipfupiso (T)
TAM - Technical Account Manager: nyanzvi yezvigadzirwa inoshanda inoshanda pamwe chete nemasangano eIT kuronga zvine hungwaru zvekubudirira kutumirwa uye kubatsira kuona kuita kwakanaka uye kukura.
TLD - Pamusoro-Chikamu Domain: iyo domeini padanho repamusoro mudunhu reZita reNzvimbo Sisitimu yeInternet mushure meiyo midzi dura. Semuenzaniso www.google.com:
google = dura
com = domasi repamusoro
TTFB - Nguva Yekutanga Byte: chiratidzo chekupindura kwewebhu server kana network sosi yekuyera iyo kureba kubva kumushandisi kana mutengi kuita chikumbiro cheHTTP kune yekutanga byte peji rinogamuchirwa nebrowser browser kana kukumbira kodhi (ye API).
Kutengesa & Kushambadzira Acronyms (U)
UCaaS - Kukurukurirana kwakabatana seSevhisi: inoshandiswa kusanganisa maturusi ekutaurirana emukati mukati mebhizinesi nekushandisa gore-based zviwanikwa.
UGC - Yemukati-Yakagadzirwa Zvemukati: inozivikanwa zvakare seyakagadzirwa-inogadzirwa zvemukati (UGC), iri chero fomu yezvinyorwa, senge mifananidzo, mavhidhiyo, zvinyorwa, wongororo, uye odhiyo, iyo yakatumirwa nevashandisi pamapuratifomu epamhepo.
UGC - Mushandisi-Yakagadzirwa Zvemukati: inozivikanwa zvakare seyakagadzirwa-inogadzirwa zvemukati (UCC), iri chero mhando yezvinyorwa, senge mifananidzo, mavhidhiyo, zvinyorwa, wongororo, uye odhiyo, yakatumirwa nevashandisi pamapuratifomu epamhepo.
UI - User InterfaceDhizaini chaiyo inopindirwa nemushandisi.
URL - Uniform Resource Locator: Iyo inozivikanwa zvakare sewebhu kero, ndiyo dura rewebhu rinotsanangura nzvimbo yaro pakombuta network uye nzira yekuitora.
USP - Yakasiyana-siyana Kutengesa Kugadziriswa: Iyo inozivikanwawo se yakasarudzika yekutengesa poindi, iri zano rekushambadzira rekuita rakasarudzika zvirevo kune vatengi izvo zvakavagonesa kusarudza yako brand kana kuchinjira kune yako brand.
UTM - Urchin Yekutevera Module: shanu dzakasiyana dze URL parameter dzinoshandiswa nevashambadziri kuteedzera kushanda kwemakambani epamhepo pamhepo traffic. Ivo vakaunzwa neGoogle Analytics 'akafanotangira Urchin uye vanotsigirwa neGoogle Analytics.
UX - Nhoroondo yevashandi: Kukurukurirana kwese mutengi ane yako brand mukati mekutenga maitiro. Ruzivo rwevatengi runokanganisa maonero emutengi ezita rako. Chiitiko chakanaka chinoshandura vangangove vatengi kuva vatengi uye chinochengeta vatengi vemazuva ano vakavimbika.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms uye zvipfupiso (V)
VAM - Vhidhiyo Kuongorora uye Management Platform - mapuratifomu anoshandisa AI uye kudzidza kwemuchina kubatsira vashandisi kukurumidza kuona nguva dzakakosha mukati mezviri mukati mevhidhiyo, zvichivagonesa kuronga, kutsvaga, kupindirana uye kugovana zvirinyore uye kugona.
VOD - Vhidhiyo Pane Kuda: inzira yekuparadzira midhiya iyo inobvumidza vashandisi kuwana varaidzo yevhidhiyo vasina echinyakare vhidhiyo yekuvaraidza mudziyo uye pasina zviyero zveiyo yakamira nhepfenyuro purogiramu.
VPAT - Yekuzvidira Chigadzirwa Chiwanikwa Template: inopfupikisa zvakawanikwa zvekuwanika kwewebhu odhita uye inonyora kuti chigadzirwa kana sevhisi zvinowirirana sei neChikamu 508 Maitiro Ekuwanika, nhungamiro dzeWCAG, nematanho epasi rose.
VR - Virtual Reality: Komputa-inogadzira simulation yenzvimbo dzematatu-matatu dzinogona kudyidzana nekushandisa zvakasarudzika zvemagetsi zvigadzirwa, senge ngowani ine chidzitiro mukati kana magirovhosi akagadzirwa nema sensors.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (W)
WCAG - Webhu zvemukati Zvekuwanika Nongedzo - inopa imwechete yakagovaniswa chiyero chewebhu zvemukati kuwanikwa zvinosangana nezvinodiwa zvevanhu, masangano, nehurumende pasi rese.
WWW - World Wide Web: inowanzo kuzivikanwa seWebhu, inzira yeruzivo uko magwaro uye zvimwe zviwanikwa zvewebhu zvinoonekwa neUniform Resource Locators, iyo inogona kupindirana ne hypertext, uye inowanikwa paInternet.
Kutengesa & Kushambadzira maAcronyms nemipfupiso (X)
XML - eXtensible Markup Mutauro: XML mutauro unoshandiswa kumisikidza dhata mune fomati inoverengwa nevanhu uye inoverengwa nemuchina.